Ikhaya Migaqo nemiqathango
Kucelwa ufunde le Migaqo neMeko ngokucophelela. Le migaqo kunye nemeko iphathelene nokusetyenziswa komxholo weBomiBogger. Kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba asivumeli ukusetyenziswa kwe-RSS yethu kwiphepha kwiwebhusayithi ukwenzela ukuvelisa ngokuzenzekelayo.
Ukufikelela kwakho kunye nokusetyenziswa kwesiqulatho sewebhusayithi kulungelelaniswa ngokwakho kwamkelwa kunye nokuthotyelwa kwale Migqaliselo. Le Miqathango isebenza kuzo zonke iindwendwe.
Ngokufikelela kwiwebhusayithi, uyavuma ukuba ubophelelwe yiMigqaliselo.
Inkonzo yethu inokuthi iqulethe iikhonkco kumaziko ewebhu wesithathu okanye iinkonzo ezingekho phantsi okanye ezilawulwa yiBomiBogger.
I-LifeBogger ayinakho ukulawula, kwaye ayinakutyala uxanduva, umxholo, imigaqo-nkqubo yemfihlo, okanye iinkqubo zaso nasiphi na isayithi zewebhu okanye iinkonzo. Uyaqhubeka uvuma kwaye uyavuma ukuba i-LifeBogger ayiyi kuba noxanduva okanye ihlawulwe ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, nangona yimuphi umonakalo okanye ukulahleka okubangelwayo okanye kubangelwe ukuba kubangelwe okanye ngokuphathelele ukusetyenziswa okanye ukuxhomekeka kuyo nayiphi na into enjalo, impahla okanye iinkonzo ezikhoyo okanye nawaphi na amawebhsayithi okanye iinkonzo.
Le Migqaliselo iya kulawulwa kwaye ilandwe ngokuhambelana nemithetho yaseNigeria, ngaphandle kokubhekiselele kwimibango yomthetho.
Ukuba unemibuzo malunga nale Migaqo, nceda uqhagamshelane nathi kwi-lifebogger@gmail.com